Php - Blogs - MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals
All Blog Posts Tagged 'php' (13)
php for beginner 4
5==8 returns false…
Added by Phyo Wai (ဗျိုင်းဖြူ) on July 15, 2012 at 4:26pm —
No Comments php for beginner 3
Added by Phyo Wai (ဗျိုင်းဖြူ) on July 15, 2012 at 4:23pm —
php for beginner 2
အထည်ဆိုင်တခုထဲမှာ အထည်တွေအရောင်အသွေးမျိုးစုံရှိနေပါတယ်။ကျနော်တို့ကသာမန်အားဖြင့် ဆိုရင် အထည်ဆိုင်ထဲမှာ အထည်စုစုပေါင်း 1000 ရှိတယ်လို့မှတ်ထားချင်ရင် ……
ဒီလိုမှတ်ထားရပါမယ်။ဒါကတော့ variable ရဲ့သဘောပါပဲ။ အထည်စုစုပေါင်းဆိုတာ variable name ဖြစ်ပြီး 1000 ဆိုတာကတော့ variable value ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာမှ အဝါရောင်ဘယ်နှစ်ထည်၊အနီ ရောင်ဘယ်နှစ်ထည်စသဖြင့်… Continue
Added by Phyo Wai (ဗျိုင်းဖြူ) on July 15, 2012 at 4:19pm —
No Comments php for beginner 1
Added by Phyo Wai (ဗျိုင်းဖြူ) on July 15, 2012 at 4:05pm —
Drupal Developer (2 posts)
minimum2years experience in drupal development.
preferably experienced in Web Design.
Please mail to myo@wcgsg.com… Continue
Added by Win Htut on September 16, 2011 at 12:55am —
php beginner တွေအတွက် rss feed ထည့်နည်း
ကျွန်တော်တို့ blog လေးမှာ RSS feed ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတာဆွေးနွေးကြတာပေါ့။ RSS ဆိုတာ xml file တစ်ခုပါဘဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ blog မှာ articles တွေကို သိမ်းထားတဲ့ table တစ်ခုရှိတယ် ဆိုပါတော့။ ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ table ရဲ့ sql ပါ။ CREATE TABLE 'articles' ( 'article_id' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , 'article_title' VARCHAR( 200 ) NOT NULL , 'article_text' TEXT NOT NULL , 'article_url' VARCHAR( 300 ) NOT NULL , 'article_author' VARCHAR( 70 ) NOT NULL ,… Continue
Added by Wai Lynn Oo on March 9, 2010 at 10:34pm —
တစ်လောကရေးခဲ့တဲ့ "How to startasoftware business in Myanmar" ဆိုတဲ့ Article ထဲမှာ အခုမှ စတင်တဲ့ Software Company တစ်ခုအတွက် အရေးအကြီးဆုံးက Human Resource လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်...
ကျွန်တော်အဓိက ကျွမ်းကျင်တာက Web Development ဖြစ်ပြီး အသုံးအများဆုံး Platform က PHP+MySql ပါ... ကိုယ်ပိုင်အလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်လို့ စိတ်ကူးပြီဆိုတော့ ကိုယ်အဓိက ပိုင်နိုင်တာကို လုပ်ရမှာပေါ့... အဲ့ဒီမှာ တွေ့ရတဲ့ ပြဿနာက ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ… Continue
Added by Ei Maung on February 3, 2010 at 1:00pm —
mysql_qurey("SET NAMES UTF8;");
Added by Ei Maung on March 21, 2009 at 9:00am —
No Comments I Hate Static Type Languages...
စိတ်ပျက်နေတယ်... တစ်ကယ့်ကို စိတ်ပျက်နေတယ်... ကျွန်တော့်ရဲ့ အချိန်တွေကို အလကား ဖြုန်းတီးနေသလိုခံစားရတယ်... အရင်ကတည်းက Dynamic Type Language တွေချည်းပဲသုံးလာတော့ အခု လိုအပ်လို့ Static Type Language ကို သုံးရတာ တစ်ကယ် စိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းတယ်... Static Type Language တွေမှာ သူ့ဟာနဲ့သူ အားသာချက်တွေရှိမယ်လို့ အကြမ်းဖျင်းလက်ခံထားတာ... ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်... ရှိပါလိမ့်မယ်... ဒါပေမယ့် နေပါစေတော့... အဲ့ဒီ အားသာချက်တွေ မရရင်နေပါစေတော့... Dynamic Type Language တွေပဲ သုံးတော့မယ်...
Beginner တွေက ဘာတွေ… Continue
Added by Ei Maung on March 12, 2009 at 9:00am —
php for beginner 3
php for beginner 1
How to write comments.php in Wordpress Theme
I Hate Static Type Languages...